Dhaqaalexumo la soo daristay xoolodhaqatada caanaha iibisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaqaalexumo la soo daristay xoolodhaqatada caanaha iibisa
La daabacay torsdag 15 januari 2015 kl 10.32
Dhaqaalexumo weyn ayaa soo foodsaartay xoolodhaqatada Iswiidhan, kadib markii dalka Ruushku joojiyay caanaha uga imanaya midowga Yurub. Hoos u dhacan dhaqaale ayaa keenay in uu hoos u dhaco qiimaha caanahu iyo waliba waxsoosaarka kale ee laga sameeyo.
Xoolodhaqato badan oo ka ganacsata caanaha ayaa walaac badan ka muujiyay arrintan, waxaanay sheegeen in ay la soo daristay xaalad adagi. Peter Peterson oo ka mid ah xoolodhaqatada deegaanka Eneryda ee gobolka Småland ayaa sheegay in ay u baahan yihiin taageero ay dawladdu siiso. Isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi;
- Dadku way ooyayaan, iskamana bixin karaan biilasha. Uma baahnin in aanu u xidhnaanno go'aan siyaasadeed iyo in uu madaxweyne Putin caqabad ku noqdo ganacsigayaga. Waa in bulshadu taageero noo fidisaa. Waxaanu gacan uga baahannahay dawladda. Waxaanu u baahannahay in naloo taageero sida uu dalka Finland u caawinayo xooladhaqatadiisa. Waxa loo sameeyay hab lagu caawinayo hal karoon halkii litir. Taageeradaas oo kale waa in aanu helno sida ugu dhakhsaha badan inta lagu jiro gu'ga
Xigasho: Ekot, P1 Morgon